Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka iPod in Lugood
> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka iPod in Lugood
Lugood fiican yahay wareejinta faylasha ay ka mid yihiin muusiga, sawiro iyo videos in aad iPod, markii iska indha tiray in ay ka saari doonaan files jir ah si loo badbaadiyo kuwo cusub. Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli ku dhacaa shot in files ka iPod gudbaayo Lugood. Sidaa darteed, haddii aad leedahay farabadan ee files u baahan in la soo guuriyeen in Lugood, aad leedahay si aad u hesho xal kale.
Nasiib wanaag, halkan waa xal saxda ah ee aad ay u guuraan files ka iPod in Lugood. Taasi waa Wondershare TunesGo (Windows). Software waxa uu ku siinayaa awood ay ku wareejiso files, dhihi songs, playlists, filimada, podcasts, music videos, Lugood U iyo Audiobook aan ku xirid ah. Intaa waxaa dheer, waxa nuqul ka kartaa music info, oo ay ku jiraan ratings, ciyaaro dacwadood qashanka in Lugood waqti isku mid ah.
Fiiro gaar ah: Dadka isticmaala Mac, waxaad isku dayi kartaa Wondershare TunesGo (Mac) si ay u gudbiyaan music on iPod in Lugood.
Sidee si ay u gudbiyaan files ka iPod in Lugood
Dooro version saxda ah ee TunesGo iyo download it on your Mac ama Windows PC.
Fiiro gaar ah: The version Windows taageertaa files ka iPod wareejinta taaban socda ee macruufka cusub 9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 6 iyo macruufka 5, iPod shaandheeyn, nano iPod iyo iPod classic in Lugood. Halkan, waxaad eegi kartaa oo dhan iPods taageeray . Iyo version Mac si buuxda u la jaan qaada iPod xiriiri 4 iyo iPod xiriiri 5 socda macruufka 9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 6 ama macruufka 5, oo sidoo kale kuu ogolaanaysaa inaad ka nano iPod / shaandheeyn / classic music dhoofin in Mac.
Connect aad iPod in kombiyuutarka adigoo isticmaalaya cable USB ah. Markaas, ordo TunesGo kombiyuutarka. Software Tani waxay si toos ah loo ogaado doonaa iPod. Markaas, aad arki doonaa adiga iPod uu furmo suuqa hoose.
On line hoose ee suuqa kala aasaasiga ah, guji "nuqul Lugood". Daaqadda pop-up yar, guji "Start". Markaas, sida aad ka arki, filimada, muusikada, playlists, podcasts, Lugood U, videos music, bandhigyada TV ku qoran yihiin. Just sii files in aad rabto. Guji "nuqul Lugood". Markaas, software this boodi doonaa files in aad qabto in Lugood iyo nuqul ka faylasha kale si Lugood.
Ama waxaad sidoo kale ku wareejin karo files iPod in mid ka mid Lugood ay hal. Guji "Media" galeeysid ka tagay. On line ugu sareeya waa music soo bandhigay, filimada, podcasts, Lugood U, videos music, bandhigyada TV iyo audiobook. Dooro hal nooc warbaahinta. Daaqadda u dhiganta, dooratid files warbaahinta doonayay. Markaas, guji "Smart dhoofinta in Lugood". Marka aan sidaa yeelno, software this gudbin doona files warbaahinta in aadan haysan in Lugood in Lugood.
Si aad u dhaqaaqo playlists on iPod in Lugood, idinku waajibka ah inaad guji "playlist" galeeysid ka tagay. Daaqadda playlist ah, oo dhan playlists ka soo baxa. Dooro playlists in aad rabto in aad guji saddexagalka hoos "Dhoofinta in". In liiska jiido-down, guji "Dhoofinta in Lugood Library".
Hadda, download TunesGo in ay isku dayaan dhaqaaqin files iPod in Lugood.